Fifampikasihan-tanana :: Lehilahy naratra tamin’ ny faniratsirana polisy • AoRaha
Niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana ny fanesoran’ireo mpitandro filaminana ny mpivarotra amoron-dalana, teny Antaniavo-Antohomadi­nika, afak’omaly hariva.
Niteraka korontana ny raharaha, ka saika niteraka -bahoaka raha tsy tonga haingana ny andiana mpitandro filaminana. Naratran’ny mpitandro ny filaminana ny lehilahy iray nividy entana teo amin’ny mpivarotra.
“Voatery nifehy an’io lehilahy mpividy io ny polisy vokatry ny herisetra nataony. Izany no nahatonga ny faha­ratrany. Noentina tany amin’ ny toeram-pitsaboana avy hatrany izy. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Afaka nody any an-tranony ity lehilahy, taorian’izay”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ ny Polisim-pirenena.
Noho ny fepetra mano­kana noraisin’ny fanjakana ho fiarovana amin’ny aretina “coronavirus” no nirosoan’ny polisy tamin’ny fampodiana an’ireo olona sy mpivarotra teny Antaniavo sy ny mano­didina, afak’omaly. “Fanao isan’andro ny fanakatonana ireo tsena sy mpivarotra mbola misokatra, amin’ny andro hariva. Rehefa tonga teny Antaniavo ny polisy no nahita mpivarotra paoma iray. Niangavy azy mba hamonjy ny toeram-podiana ireo mpitandro filaminana. Nilaza ilay mpivarotra fa miandry vola teny amin’ny lehilahy iray mpividy”, araka ny fanazavana azo mikasika an’ity raharaha ity.
Niafara tamin’ny savoro­voro teo amin’ireo olona teo amin’ny manodidina sy ny mpitandro filaminana ny zava-niseho. Saika niharan’ ny hatezeran’ireo olona sasany iretsy farany. Soa fa tonga haingana ireo polisy hafa tamin’ny fifehezana ny andaniny sy ny ankilany.
“ Nilaza fa efa nanome ny volan’ilay mpivarotra iry lehilahy mpividy rehefa nanontanian’ny polisy. Nahenoana fofon-java-pisotro misy alikaola izy no sady nanao fihetsika tsy voahevitra tamin’ny mpitandro filaminana”, hoy hatrany ny avy amin’ny Polisim-pirenena.
Tsara ny manamarika fa mandalo vanim-potoana manokana ny firenena, amin’izao fotoana izao. Tokony hanaraka ny toromarika avy amin’ny mpitandro filaminana avokoa ny rehetra mba tsy hiverenan’ ny olana toy izao.
Fahombiazan’ny fitsaboana :: Sitrana ny olona roa tamin’ ireo voan’ny « coronavirus »
Fitaterana vonjy maika :: Tafakatra avo roa heny ny saran-dalana mihazo ny faritra